किसान नजरमा गुठी विधेयक | langtangnews.com
Posted By: Hemnath Khatiwada June 17, 2019
अहिले काठमाडौँ तताउनेहरूले उठाएका विभिन्न सवालमध्ये एउटा यो पनि हो। उनीहरूको भनाइ छ– ‘अब गुठीको जग्गा सकिने भो ! पूजाआजा, धार्मिक संस्कार, जात्रा आदि कसरी चलाउने ? मासिन भो।’ यसका लागि केही कुरामा प्रस्ट हुनु जरुरी छ– पहिलो, नेपालका सबै जग्गा सरकारको हो। त्यसैले रैकर गर्दा पनि सरकारले मालपोत कर लिन्छ नै। यसबाट आम्दानी हुने नै भइहाल्यो। दोस्रो, किसानले रैकर गर्दा तोकिएको शुल्क तिर्नुपर्छ। बाँकी कुत तिर्नुपर्छ। सित्तैँमा रैकर हुँदैन। यसो गर्दा गुठीको कोषमा खरबौँ रुपियाँ जम्मा हुन्छ। त्यसको ब्याज नै पर्व धान्न काफी हुन्छ। तेस्रो, गुठी तैनाथी जग्गाको समुचित प्रयोग गर्न सक्दा महिनाकै अर्बाै रुपियाँ जोगाड हुन्छ। अनि जग्गामा जोताहाले आफ्नो स्वामित्व पाइसकेपछि लगाउने मेहनत र खर्चने ऊर्जाका कारण उत्पादन ह्वात्तै बढ्छ। यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मजबुत बनाउँछ। त्यसैले जसले माटोमा दिनरात पसिना बगाउँछ उसैलाई जग्गाको मालिक बनाउँदा कसैलाई हानि हुँदैन। बरु सबैको भलो हुन्छ।
पुर्खाैदेखि गुठीका जमिन जोतेका, कुत पनि तिरेका तर आफूले खाइनखाइ तिरेको कुत दुरुपयोग भएको, वास्तविक जोताहाको भने दिनप्रतिदिन अवनति हुँदै गएको अवस्थामा आएको गुठी विधेयकले पीडितको घाउमा केही हदसम्म मलम लगाउने देखिएको छ।
जहाँसम्म यतिबेला विधेयक फिर्ता लिने एकसूत्रीय मागसहित केही ठाउँमा आन्दोलन भइरहेका छन्, उनीहरूका माग सुनिनुपर्छ। बुझाइमा समस्या भए ‘कन्भिन्स’ गराउन सक्नुपर्छ। कतिपय अस्पष्ट र अव्यावहारिक प्रावधान छन् भने तिनलाई संशोधन गरेर अघि बढ्न सकिन्छ। तर विधेयक नै फिर्ता गर्नुपर्ने अडानचाहिँ अहिले गुठीका काम/कारबाही सबै ठीक ढङ्गसँग अघि बढेकाले यो चाहिन्न भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु हो। अहिले गुठीका गतिविधि सही छन् त ? पक्कै छैनन्। त्यसैले विधेयक फिर्ता हैन, संशोधनसहित पारित गर्नु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। जसरी शरीरको कुनै एक भागमा क्यान्सर लागे त्यो भाग मात्र उपचार गर्ने हो, पूरै शरीरको उपादेयता सकिन्न त्यसैगरी यो विधेयकका केही कमजोरीका निहुँमा पूरै विधेयक काम लाग्दैन भन्नु समस्या चर्काउने चालमात्र हो।